युवा उमेरमा नै कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ ? बन्यो कपाल उमार्ने उपकरण » Khulla Sanchar
युवा उमेरमा नै कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ ? बन्यो कपाल उमार्ने उपकरण
काठमाडौं– आजकाल धेरै मानिसमा कपाल झर्ने तथा बिस्तारै तालुखुइले हुने समस्या दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । युवा उमेरमा नै कपाल झरेका कारण धेरैलाई यो समस्याले सताउने गरेको छ । तर कपाल झरेर हैरान हुने मानिसका लागि एउटा खुसीको खबर छ ।
केही शोधकर्ताहरुले कपाल उमार्ने नयाँ उपकरणको आविस्कार गरेका छन् । अमेरिकाको विस्कान्सिन मेडिसन यूनिर्भसिटीका प्रोफेसर जूडोङ्ग वाङ्गले यस कपाल उम्रने यन्त्रको विकास गरेका हुन् । कपाल झरेर हैरान भएका मानिसलाई लक्षित गर्दै वाङ्ग र उनका सहयोगी शोधकर्ताहरुले टोपीभित्र पहिरन मिल्ने एक उपकरणको आविस्कार गरेका छन् ।
जसले केही साताभित्रै कपाल झरेको भागमा पनि सहजै कपाल उमार्न सक्दछ । उक्त उपकरण पहिरिना साथ यसबाट एक किसिमको ऊर्जा उत्पादन हुने र त्यसले कपालको जरासम्म पुगी नउम्रिने कपाललाई समेत उम्रिन प्रेरित गर्दछ । कपाल झरेको भागमा समेत कपाल उमार्न उत्तेजित बनाउने उक्त उपकरणले एक प्रकारको इलेक्ट्रिक पल्सेज निकाली कपालको जरामा पठाउने गर्दछ ।
उक्त उपकरण चल्नका लागि कुनै ब्याट्री वा चार्जको आवश्यकता पर्दैन । यसले मानिसको गतिविधिबाट नै आफूलाई चार्ज गर्ने शोधकर्ताहरुको दावी छ । यो मेसिन साधारण टोपीको भित्री भागमा सहजै लगाउन सकिन्छ । उक्त उपकरणको निर्माणपछि रौं नभएका मुसामा परीक्षण गरिएको थियो । जसले केही सातामा नै मुसाको शरीरमा रौं उमार्न सफल भएको थियो ।